Mmanya | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Esi mee ka osisi champee a na-eme n'ụlọ mpempe osisi
N'echiche nke champeenu, ọtụtụ ndị na-eme ka ọnọdụ ha ka mma. A na-ewere ya dị ka ihe ọṅụṅụ nwanyị, mana ndị ikom na-aṅụkwa ya na obi ụtọ. Anyị maara n'eziokwu na a pụrụ ịchọta ihe ọṅụṅụ a na ụlọ ahịa ma ọ bụ nanị ihe ọṅụṅụ nke mkpụrụ vaịn ma ọ bụ ihe ọṅụṅụ mmanya. Ọ na-apụta na ị nwere ike ịme champeenu n'ụlọ site na ihe ndị dị mfe, nke bụ isi bụ akwụkwọ osisi greepu.
Ihe ị chọrọ na otu esi edozi mmanya ahụ n'ụlọ
A ghaghị idozi mmanya vine, nke ọ bụla e mere ya. Usoro a ga - enyere aka mee ka uto ya jupụta na ịṅụ mmanya ruo ogologo oge. Usoro ya dị mfe: ị ga-achọ wort, mmanya ma ọ bụ tincture na shuga. Kedu ihe a ga - eme na ya na ihe dị na nkà na ụzụ - anyị ga - achọpụtakwu ihe. Kedu ihe dị mkpa iji dozie mmanya?